Sida loo sameeyo faylka SVG | Hal-abuurka khadka tooska ah
Marka la abuurayo degel, naqshadeeyaha shabakada waa inuu xisaabta ku daraa afar qodob oo waaweyn ka fekerida qaabka iyo nashqada muuqaalka webka, ah qoraalka, sawirada, midabada iyo xarfaha shaqaalaha.
Afartaan qodob, midda ugu muhiimsan ee aan qoraalkan ku soo bandhigi doono waa sawirada, mar haddii aan ka hadli doono. sida loo sameeyo svg files maadaama ay aad muhiim u tahay in la tixgeliyo tayada sawirada aad ku shaqeyso.
Daawaynta faylalka SVG, ayaa waxaa sii kordhayay xirfadlayaasha oo aan sidaas ahayn xirfadlayaasha adduunka naqshadeynta.
1 Waa maxay faylka SVG?
2 Maxay tahay sababta aan u isticmaalno SVG?
3 Sida fudud ee loo abuuro faylasha SVG
Waa maxay faylka SVG?
SVG waa soo gaabinta Ingiriisida ee Scalabe Vector Graphics, ee Isbaanishka, Sawirada Vector-ka la Miisaamin karo. Waxay ku saabsan tahay a qaab furan oo bilaash ah kaas oo lagu abuurayo garaafyada 2D, laba cabbir.
Si ka duwan qaababka kale ee sawirka, sida JPG ama PNG, SVG waa qaab la cabbiri karo, iyadoon loo eegin inta aad rabto inaad kordhiso cabbirkeeda, tan iyo tayada sawirka ayaa la ilaalin doonaa. Waa mid ka mid ah qaababka aadka loo isticmaalo ee bogagga shabakadda si loo dhigo garaafyada ama sawirada vector.
Maxay tahay sababta aan u isticmaalno SVG?
Qaabka noocaan ah, sawirada vector waxay ilaalin doonaan tayada sare, iyadoon loo eegin cabbirkooda iyo xallintooda. Taa lidkeeda, sawirada ka samaysan qariiradaha loo yaqaan 'bitmaps', oo ka samaysan pixels, lumin tayada haddii la cabbiro. Qaabka SVG waxa lagu qeexaa fudaydkiisa iyo badnaantiisa.
Qodob kale oo ku habboon isticmaalka qaabkan waa cabbirkiisa yar, taas oo ah, mahadsanid tan waxay kordhisaa xawliga rarka ee boggaga ay ku yaalaan. Sawiradan waxaa dhisay browser-ka, kaas oo ka caawinaya in la yareeyo culeyska iyo isticmaalka server-ka.
Intaa waxaa dheer, waxay awoodaan samee sawirada SVG ee firfircoon kaas oo aan ku siin karno mareegahayaga hawo isu soo dhawaansho iyo soo jeedinta dareenka daawadayaasha soo booqda.
SVG waa qaab furan, yacni, laga yaabaa in lagu sameeyo horumar iyo updates. Intaa waxaa dheer, faylasha SVG waxaa lagu daabici karaa barnaamijyada vector editing, tusaale ahaan Adobe Illustartor iyada oo aan lumin tayada muuqaalkeeda, waxaa laga arki karaa qalab kasta. Waxa kale oo ay noo ogolaataa in aan daabacno iyada oo aan tayada lumin.
Sida fudud ee loo abuuro faylasha SVG
Waxaa laga yaabaa in sida ugu fudud ee loo abuuri karo faylasha SVG, haddii aad aqoon u leedahay, ay tahay iyada oo loo marayo barnaamijka naqshadaynta garaafka, sida Illustrator, Corel Draw, iyo kuwo kale.
Diirada saarida barnaamijka Sawir-qaade, marka aan isticmaaleyno qaabka SVG, waa inaan xisaabta ku darnaa haddii aan isticmaalnay gradients ama saameyno kale, sida saameynta farshaxanka, blur, burushyada, pixels, iwm. maadaama la rasterized markii lagu kaydiyay qaabka faylka SVG. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo saamaynta filter SVG, si loogu daro saamaynta si aan mar dambe la rasterized.
Talo kale oo aan ku siino waa inaad isticmaasho calaamadaha fudud iyo waddooyinka sawirada si loo helo waxqabad wanaagsan ee qaabka la sheegay. Iska ilaali inaad isticmaasho buraash leh baafin badan sababtoo ah tani waxay dhalinaysaa culays xog sare leh.
Si aad u abuurto faylka SVG barnaamijkan, Waxa ugu horreeya ee ay tahay in aan furno waa sharaca maran halkaas oo aan ka shaqeyn doono fikraddayada.
Marka shaqadayadu dhammaato, waxa aanu qaban doonno waa in aad tagtaa toolbar ee ka muuqda barnaamijka korkiisa, waxaana dooran doonaa ikhtiyaarka ah file, save as, oo shaashad soo booda ah ayaa ka soo bixi doonta halka ay noo sheegayso inaan siino faylkayaga magac oo tilmaan qaabka aan rabno inaan ku badbaadinno. Waa qaybtan u dambaysa halka ay tahay in aan ku calaamadeyno doorashada SVG.
Markaad dooranayso nooca SVG, sanduuqa wada-hadalka ayaa soo baxaya oo ina tusaya doorashooyin kala duwan oo ay tahay in xisaabta lagu daro.
Sida caadiga ah, goobta ugu horeysa ee ka muuqata shaxda, SVG 1.1 profile ayaa soo muuqda. Kuwa soo socda waxay ina siinaysaa ikhtiyaarka ah inaan doorano ilaha, taas oo ay na siinayaan gabay qoraalka lagu calaamadeeyay SVG iyo qayb hoosaadka midna. Xaaladeena, shaqadani ma laha xarfo, haddii ay samaysay, xulashada qayb-hoosaadka waa in laga beddelaa midna ilaa dhammaan sawirada.
Qaybta soo socota aad bay muhiim u tahay, haddii aan tilmaanno ikhtiyaarka ku duugan, sawirada halabuurka ayaa lagu dhex dari doonaa faylka, taas oo keeni doonta in ay korodho miisaan haddii aan isticmaalno sawirro badan oo bitmap ah. Haddii, dhanka kale, aan calaamadeyno ikhtiyaarka isku xirka, waa inaan ka taxaddarnaa sawirada haddii aan u isticmaaleyno bogga internetka, maadaama ay tahay inaan ku darno faylasha sawiradayada, iyo sidoo kale, aad muhiim u ah, ilaalintooda waddo. Faa'iidada doorashadan ayaa ah in faylalka ay miisaankoodu aad u yar yahay.
Qaybta fursadaha horumarsan waxaynu ka helaynaa ikhtiyaarka ah Koodhka SVG, doorashadani waxay tusin doontaa sida faylka gudaha ugu jiro, taas oo ah, code ka dambeeya shaqadeena. Doorashadani waa lama huraan haddii aad rabto inaad ku darto faylkaaga SVG, tusaale ahaan WordPress-kaaga gaarka ah, kaliya waa inaad nuqul ka sameysaa koodka oo aad si toos ah ugu dartaa tifaftirahaaga HTML ee WordPress.
Talada ugu dambeysa ee aan ku siino waa marka aad wax ku kaydsanayso qaabka SVG, Maskaxda ku hay in haddii aad ku shaqaynayso sabuuradaha farshaxan ee kala duwan, kaliya waxa la hayn doonaa sabuuradda farshaxan ee firfircoon.
Haddii aan rabno inaan sii wadno oo aan ku dabaqno saameynta SVG sawirkayaga, Illustrator wuxuu na siinayaa saameyno kala duwan. Si tan loo sameeyo, waa inaan dooranaa shay ama koox. Si loo dabaqo saamaynta waa inaan dooranaa daaqada saamaynta, filtarrada SVG oo aan isticmaalnaa.
Markaad codsaneyso shaandhada SVG, barnaamijka naqshadeynta wuxuu na tusayaa daaqad meesha Liiska filtarrada lagu dabaqi karo ayaa soo muuqda, Marka aan dooranno mid, Illustrator wuxuu na tusayaa sida ay u egtahay, laakiin qaab rasterized ah.
Sida aad arki karto, ee Qaabka SVG wuxuu ahaa kacaan. Waad ku mahadsan tahay kartideeda iyo tayada in ay bixiso, ka dhigaysa boggaga internetka ee aan ka helno wax badan oo soo jiidasho leh iyada oo aan la hurin waxqabadka, ilaa iyo inta ay si sax ah u isticmaalaan qaabka la sheegay. SVG waxa ay noqotay midowga ugu fiican ee ka dhexeeya aduunka naqshadaynta iyo horumarinta webka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida loo sameeyo faylka SVG
Noocyada qaababka Photoshop